Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #0; Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #605
Izimfihlakalo Zezulu #605
605. INGQONDO ENGAPHAKATHI
Okuyisihloko noma okukhulunywa ngakho kulezizahlukwana wukubunjwa kweSonto elisha elibizwa ngo “Nowa”. Ukubunjwa kwaleliSonto kuchazwa njengemgomkhumbi okuyongeniswa kuwo zonke izinhlobo zezil-wane. Kodwa ngaphambi kokuba umuntu waleSonto angeniswe kulo, njengokujwayelekile, kwakumele nakanjani adlule ezilingweni, ezichazwa ngokuphakanyiswa komkhumbi, uthwalwe, umiswe emanzini kazamcolo. Ekugcineni, ukuthi lowomuntu waba ngumuntu wezulu likamoya wempela, umuntu owayesekhululiwe, uchazwa njengamanzi kazamcolo abohlayo nangeminye imininingwane elandelayo. Kakho umuntu onengqondo yemvelo yeZwi yodwa ongaba nolwazi noma ongayibona lencazelo, nomphumela wokungayazi lencazelo wukuthi yonke iminining wane okukhulunywa ngayo lapha ixhunyaniswa ngokulandelani njengomlando, ikhiqize uhide lwezigigaba zomlando. Nokho lokhukulandelanisa imininingwane njengomlando, okwakuyinto eyayibanika injabulo enkulu kakhulu, kwakuwuhlobo lokukhuluma kwabantu bangaleyonkathi, nokwakuwuhlobo lokuba zonke izinto zazigoqwe ngemi-fanekiso, zaphicwa maqede zethulwa njengomlando; nokuxhumana kwezigigaba njengomlando owodwa babekuthanda futhi kwakufanelene nohlobo lwesimilo sabo. Ngokuba abantu bangaleyonkathi yasemandulo babengagebele ezintweni elwazini olusenkumbulweni njenganamuhla, kepha babegebele emicabangweni ejulile nemiphumela yayo kwakuyizinto ezichazwa lapha. Lokhu kwakuyinhlakanipho yabantu basemandulo.
Izimfihlakalo Zezulu 1885